Koeman oo sharraxay sababta ay Barcelona barbaraha ula gashay kooxda Eibar – Gool FM
(Barcelona) 30 Dis 2020. Tababaraha kooxda Barcelona ee Ronald Koeman ayaa ka soo muuqday shir jaraa’id si uu uga hadlo barbarihii ay xalay la galeen naadiga Eibar.
Kooxaha Barcelona iyo Eibar ayaa dhibcaha ku qeybsaday garoonka Camp Nou, kaddib markii ay ku kala baxeen barbardhac 1-1 ah, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada toddobaadkan ee horyaalka La Liga dalka Spain.
Haddaba tababaraha reer Holland ee Ronald Koeman ayaa ciyaarta kaddib u sheegay warbaahinta:
“Ma aanan raadinin waxa nagu filan xiddigaha khadka dhexe si aan u abuurno fursado waa weyn, dabcan waxaan weynay Messi kulankan, maadaama uu yahay ciyaaryahan weyn oo mar kasta farqi sameeya.”
“Maanta waxaan uqalnay inaan guuleysano, waxaan sameynay wax nagu filan si aan seddexda dhibcood ula soo baxno, waan ka daalay in aan naftayda u sheego sidee ayaynu u guuleysan Karin, gaar ahaan maadaama aan abuurnay fursado badan.”
“Waxaa jiray waxyaabo maanta naga soo horjeeday, oo ay ugu muhiimsan tahay in kooxda naga soo hor jeeday ay tuurtay hal shuud wuuna naga dhashay.”
“Ma garanayo sababta ay u adkeyd inaan kubadda gadaal kaga soo bilaawno qeybtii hore, ma cabsi darteed, mise sababo kale awgood, guud ahaan si fiican uma aanan sameynin qeybtii hore.”
Intaas kaddib Ronald Koeman ayaa ka hadlay rigooradii uu kooxda Barcelona ka qasaariyay Martin Braithwaite, wuxuuna yiri:
“Waxaan luminay rigoore, waxaan khasaarinay fursado badan, waxaa nalaga dhaliyay gool iyadoo Eibar ay hal shuud ku bartilmaameedsaday goolkayaga, waxyaabo badan ayaa maanta naga soo horjeeday.”
“Marka uusan joogin Messi, waxaa jooga Griezmann oo hadda ka hor rigoore ka lumiyay kooxda, isla markaana Braithwaite uu dhaliyay mid kale, ciyaartoyda waxay ogolaadeen dhexdooda in Braithwaite uu tuuro.”
Ronald Koeman oo ka hadlayay fursadaha Barcelona ee horyaalka Spain, ayaa wuxuu yiri:
“Xaqiiqdii, way adag tahay ku guuleysiga horyaalka, ma ahan wax aan macquul aheyn, laakiin waa inaan fahanno farqiga inoo dhexeeya annaga iyo hoggaamiyaha.”